‘विप्लव’सँग तपाईंको भेटलाई विभिन्न कोणबाट हेरियो नि ? भन्दा रेखाको आयो यस्तो जवाफ – ramechhapkhabar.com
‘विप्लव’सँग तपाईंको भेटलाई विभिन्न कोणबाट हेरियो नि ? भन्दा रेखाको आयो यस्तो जवाफ
अभिनेत्री रेखा थापा अभिनय, सामाजसेवा होस् वा राजनीति, सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहन्छिन् । हालै रेखाले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग समेत भेट गरेकी छन् । सरकारसँग वार्ता र सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका ‘विप्लव’ र रेखाबीचको भेटलाई धेरैले विभिन्न कोणबाट पनि व्याख्या गरेका छन् । रेखाले भने ‘विप्लव’सँगको भेट व्यक्तिगत भएको बताउँदै आएकी छन् । राप्रपाबाट अहिले राजनीतिक जीवन अगाडि बढाइरहेकी उनको पछिल्लो समय केही मिडियामा विवाहको समाचारले समेत प्राथमिकता पाइरहेका छन् । उनी भने त्यसलाई गलत र नचाहिँदो हल्ला बताउँछिन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रकी सफल अभिनेत्री रेखा थापासँग राजनीति, विवाह र फिल्मको विषयमा रहेर गरिएको कुराकानी ।
–त्यस्तो खासै केही छैन । नयाँ फिल्म निर्माणको तयारी गर्दैछु । त्यसका लागि स्टोरीदेखि अन्य तयारी भइरहेको छ । वैशाखमा नाम दर्ता गरेपछि सार्वजनिक गर्छु । भेटमा सत्तामा आउन लाग्नुभएको छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्छन्, तपाईंका त्याग र तपस्या त्यतिकै सकिएला भनेर भनेर सोधेकी पनि थिएँ । उहाँले तपाईं निश्चिन्त हुनुहोस्, हामी जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने हो, हाम्रो एजेन्डा नै त्यही छ भन्नुभयो । नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग तपाईंको भेटलाई विभिन्न कोणबाट हेरियो नि ?
–त्यो भेट व्यक्तिगत थियो । उहाँलाई लागेको प्रतिबन्धको विरोधमा मैले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएकी थिएँ । उहाँका एजेन्डा मलाई राम्रो लागेको थियो । उहाँ सार्वजनिक भएपछि भेट्न बोलाउनुभयो, भेटेँ । त्यस्तो अन्य केही होइन ।
‘विप्लव’लाई कस्तो नेताको रूपमा पाउनुभयो ?
–जनताप्रति उहाँ एकदमै उत्तरदायी भएको नेताको रूपमा पाएकी छु । उहाँका एजेन्डा एकदमै राम्रा छन् । मैले त्यही सवालमा पनि भेट गरेकी हुँ । भेटमा सत्तामा आउन लाग्नुभएको छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्छन्, तपाईंका त्याग र तपस्या त्यतिकै सकिएला भनेर भनेर सोधेकी पनि थिएँ । उहाँले तपाईं निश्चिन्त हुनुहोस्, हामी जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने हो, हाम्रो एजेन्डा नै त्यही छ भन्नुभयो । जनताप्रति एउटा जिम्मेवार नेताका रूपमा
उहाँलाई मैले पाएँ । आफ्नो पार्टीमा आउने अफर पनि दिनुभयो कि ?
–आफर दिने लिनेभन्दा पनि सामान्य भेट हो । त्यसैको रूपमा बुझिदिन अनुरोध गरेँ ।